स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियाे अस्पतालका नाउँमा ‘खाली भवन’लाई २ करोड ! – Waikhari
गृहपृष्ठ पत्रपत्रिका बाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियाे अस्पतालका नाउँमा ‘खाली भवन’लाई २ करोड !
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियाे अस्पतालका नाउँमा ‘खाली भवन’लाई २ करोड !
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक वर्ष सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गर्दै आएको रकम दुरुपयोग भएको छ । जनताले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा लिन टाढा जान नपरोस् भनी सरकारले देशभरका सामुदायिक अस्पताललाई वर्षेनी करोडौं रकम वितरण गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले डडेलधुराको अपी सामुदायिक अस्पताललाई दुई करोड चार लाख ६० हजार रुपैयााँ दियो । तर, एक वर्षपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमनमा जाँदा अस्पतालमा सेवा लिन बिरामी नै नआएको फेला पर्यो । मन्त्रालयका अनुसार एक महिनामा दुई जना बिरामी सेवा लिन आएको देखिएको छ ।
उनीहरु पनि स्वास्थ्यकर्मी नपाएर फर्किने गरेका थिए । अस्पतालले मापदण्ड पनि पूरा गरेको छैन । उपक्षेत्रीय अस्पताल भन्दा करीब १५ सय मिटरमा रहेको उक्त अस्पताललाई अनुदान रकम दिन जरुरी नभएको सरकारी टोलीले ठहर गरेको छ । याे खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ।